Ny fomba hitsena ny vehivavy avy amin'ny firenena hafa
Ny fomba hitsena ny vehivavy avy amin’ny firenena hafa
Raha taona lasa izay, ny olom-pantatra amin’ny vehivavy avy amin’ny firenena hafa dia karazana tantara foronina, ary ny iray ihany fa afaka manam-bola ny kintana, ny fanatanjahan-tena sy hampiseho ny raharaham-barotra, ny fiavian ny Internet sy ny fanatontoloana niova ny zava-drehetra. Ankehitriny mba hahafantatra ny vehivavy vahiny iray tena mora foana. Voalohany indrindra tokony ho fantatrao izay afaka hihaona miaraka amin’ny vehivavy hafa firenena ihany raha afaka mifandray aminy. Mba hanaovana izany, tsy maintsy ho fiteny iombonana sy ampy ny fanehoana ny kolontsaina. Ohatra, raha te-hitsena ny vehivavy iray avy any Kanada, tsy maintsy fantatrao na ny teny anglisy na ny teny frantsay. Manana hevitra Ankapobeny mikasika ny Kanada, ny momba canadian kolontsaina, momba ny soatoavina canadian ny vehivavy sy ny momba ny fifandraisana eo amin’ny lehilahy sy ny vehivavy ao Kanada. Avy eo ianao dia ho afaka manomboka ny resaka (live chat) sy ny mahita lohahevitra mahazatra ny resaka tsy misy ny olana amin’ny fanovana ny fomba fisainana. Fiteny afaka mianatra amin ny tenanao, dia afaka mandeha any manokana teny am-pianarana. Amin’ny fomba tsara sy ny manokana ny faniriana hanangana ny haavon’ny ny fahaizany ny fiteny iray izay mifanaraka amin’ny haavon’ny nandritra ny herintaona. Ny vola lany rehetra izany dia tsy lehibe. Ho an’ny kolontsaina, avy eo dia manomboka mijery lahatsary blaogy ny mpiray tanindrazana miaina eto amin’ity firenena ity (tsara, dia afaka hahatakatra ny fahasamihafana eo amin’ny toe-tsaina), mijery lahatsary fanadihadiana momba ny firenena, ary tsikelikely ny jiro any amin’ny haino aman-jery ofisialy sy ny toerana malaza ao amin’ity firenena ity. Nandritra ny taona maro, dia afaka mahazo fahalalana be dia be momba ny firenena sy ny vahoaka ao aminy. Ny iraisam-pirenena ny Mampiaraka toerana. Misy manokana iraisam-pirenena Mampiaraka toerana izay afaka misoratra anarana ary ny manomboka ny fifandraisana amin’ny vehivavy saika na aiza na aiza eto amin’izao tontolo izao. Ohatra, ny Fiarahana sy ny maro hafa. Ny tena tombon-dahiny ny toerana toy izany, dia tena vehivavy vitsivitsy dia fanahy iniana hisoratra anarana ho azy ireo. Satria ny vehivavy no tena tsy resy lahatra ny iraisam-pirenena Mampiaraka. Ny eo an-toerana ny Mampiaraka toerana. Izany no mahomby kokoa mba hisoratra anarana eo an-toerana Mampiaraka toerana izay misy ny vehivavy ato amin’ity firenena ity mitady lehilahy iray avy amin’ny firenena. Ohatra, raha toa ka mila ny vehivavy iray avy any Kanada, mila miditra eo Amin’ny Fiarahana sy ny toy izany toerana. Mazava ho azy, mety hisy ny olana sasany amin’ny fisoratana anarana noho ny zava-misy fa tsy maintsy ao an-toerana an-telefaonina maro, eo ihany koa ny ampahany amin’ny vehivavy dia ny hifandray aminao izy raha mahita ianao dia ny vahiny, saingy mbola maro ny fotoana kokoa ny mahita ny vehivavy iray ho an’ny fifandraisana iraisam-pirenena noho ny toerana.
Ny ambony indrindra amin’ny isan’ny vehivavy nisolo tena ao amin’ny Facebook. Ka raha toa ka tsy manana ny fahafahana sy ny faniriana hiasa amin’ny Mampiaraka toerana, dia tokony hifandray amin’ny Facebook. Na izany aza, io fomba io dia mitaky be dia be ny fotoana mba hanivana ny vehivavy, noho izany dia tsy misy santionany amin’ireo izay mitady ny fifandraisana, ny lisitry ny vehivavy rehetra izay manana. Long, mankaleo, fa indraindray tena mahomby.
Misy ihany koa ny fahafahana mifankahita amin’ny vehivavy eo amin’ny misy foto-kevitra website. Ohatra, ny tranonkala tia mozika kilasika afaka manomboka mifanaraka amin’ny foto-kevitra ny mozika, ary avy eo nitombo tsikelikely ny famindrana ny fifandraisana manokana amin’ny foto-kevitra, raha toa ka hisy ny tsy mifatotra Mazava ho azy, ny fifandraisana amin’ny Aterineto dia mamela anao hahita ny vehivavy iray ho an’ny fifandraisana, mba akaiky azy ary na dia ny hifampiraharaha momba ny hoavy. Nefa miasa miaraka amin’ny kely vehivavy maro izay na raiki-pitia aminao ny fihetseham-po, na diso fanantenana ny mahita tia. Izany hoe na ny adala na mamoy fo. Toy izany koa ny fomba tsotra indrindra mba hahita ny any ivelany ny vehivavy mba handeha ho any amin’ny firenena izay mila ny vehivavy. Tsara kokoa mifanaraka amin’ny ity fianarana ny teny, matihanina internships, na fonenana maharitra. Izany hoe ny fandehanana any amin’ny firenena nandritra ny fotoana kelikely, hihaona vehivavy, hampitombo congenial namana, manomboka ny fifandraisana amin’ny azy ireo. Ary avy eo dia miombon-kevitra amin’ny fomba sy izay miara-miaina. Izany miasa tena tsara, ary ny ankamaroan’ny olona hanaovana izany. Vitsy ireo vehivavy te hampiaraka ny olona-afrikana ilay mpangataka. Koa raha ilainao vehivavy avy any amin’ny firenena hafa, ary tsy te-hijanona any amin’ny firenena, tokony ho sarobidy manam-pahaizana manokana, izay afaka manome ho an’ny tenany sy ny vehivavy. Noho izany, raha toa ka ianao ao Brezila, mahazo ny fampianarana ambony, dia hahazo ny taratasy fanamarinana ny fahalalana ny teny, miezaka ny hahazo fahazoan-dalana ofisialy ny asa any amin’ny firenena hafa, ary koa ny hafa izay mampiseho ny taratasy fanamarinana ny haavon’ny. Rehefa ny vehivavy dia mahalala fa ianao dia tsy olona tsara, fa sarobidy ny olona izy no vonona kokoa te hanorina fifandraisana amin’ny ianao.
Ianao mamazivazy ahy
Ny mpifindra monina velona nandritra ny taona maro tao Canada. Ny vehivavy eo amin’ny olona tsy hijery indrindra Breziliana. Ary ianao miresaka ny momba ny sasany isam-bolana manao hoe.
Ny vintana rehetra
← Hitsena ny zazavavy tsy misy fisoratana anarana Lahatsary